Top 8 sữa dành cho người ung thư phổi phục hồi sức khỏe tốt nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 8 sữa dành cho người ung thư phổi phục hồi sức khỏe tốt nhất | Muasalebang in Muasalebang
Ubisi lwabantu abanomdlavuza wamaphaphu Kufanele ngikhethe kanjani? Ngoba lokhu kuyisifo esikhethekile, uma ukhetha ubisi ngezithako ezicasulayo, kuzothinta kakhulu impilo yesiguli. Ngakho ngaphambi kokunquma ukusebenzisa wonke umuntu kufanele abonane nodokotela noma abhekisele kulesi sihloko kuqala!
1 1. Uyini umdlavuza wamaphaphu? Ukudla kweziguli ezinomdlavuza wamaphaphu?
1.1 1. Ubisi nemikhiqizo yobisi
1.2 2. Izithelo nemifino
1.3 3. Ukudla okunamaprotheni amaningi
1.4 4. Phuza amanzi etiye nsuku zonke
2 2. Ingabe iziguli ezinomdlavuza wamaphaphu kufanele ziphuze ubisi?
3 3. Imibandela yokukhetha ubisi kubantu abanomdlavuza wamaphaphu
4 4. Ubisi olungcono kakhulu lwabantu abanomdlavuza wamaphaphu
4.1 I-Prosure Milk – Ubisi Oluphezulu Olu-1 olungcono kakhulu lwabantu abanomdlavuza wamaphaphu abangaluthenga
4.2 I-Recova Gold Milk
4.3 Ubisi lwe-Peptamen
4.4 Ubisi lwe-Fortimel
4.5 Ubisi olusekelayo – 200ml
4.6 Ubisi Digesta
4.7 Ubisi lwe-Foticare
4.8 I-Colostrum Alpha Lipid Lifeline
5 5. Qaphela lapho usebenzisa ubisi kubantu abanomdlavuza wamaphaphu
1. Uyini umdlavuza wamaphaphu? Ukudla kweziguli ezinomdlavuza wamaphaphu?
Umdlavuza wamaphaphu (IsiNgisi Umdlavuza Wamaphaphu) uwuhlobo lomdlavuza oqala emaphashini, owaziwa nangokuthi izimila eziyingozi, ezivela ku-epithelium ye-bronchi, i-bronchioles, i-alveoli noma izindlala ze-alveoli.
Nakuba ukuthola ukudla noma isithasiselo esingakwazi ukwelapha ngokuphelele umdlavuza wamaphaphu kuze kube manje kungase kuthiwe akunakwenzeka, uma isiguli esinomdlavuza wamaphaphu sinokudla okunempilo, Ukondleka okufanele kusengathuthukisa imiphumela yokwelashwa kanye nokunciphisa ukuqhubekela phambili kwezifo ezimbi.
Ngakho-ke yini futhi kufanele idle kanjani iziguli ezinomdlavuza wamaphaphu? Nazi iziphakamiso ezimbalwa mayelana nokudla kweziguli ezinomdlavuza wamaphaphu ongabhekisa kuzo:
1. Ubisi nemikhiqizo yobisi
Sibhekisela kokunye kokudla okunikeza i-calcium namaprotheni amaningi kakhulu emzimbeni, ngokuqinisekile ngeke singaluzibi ubisi. Njengamanje emakethe kunezinhlobo eziningi zobisi ezinhle zabantu abanomdlavuza wamaphaphu ongazibhekisela esigabeni esingezansi sesihloko.
Lesi esinye sezixazululo ezilungile zokusiza iziguli ukuthi zibuyise imisoco ngokushesha futhi zithole impilo ngemuva kokukhathala nobuhlungu isikhathi eside.
Xem Thêm Dung dịch chấm mụn Mario Badescu Drying Lotion "thần thánh" đến đâu? | Muasalebang
Akuwona ubisi kuphela kodwa nemikhiqizo yobisi efana noshizi, iyogathi, whey, ubisi olusha olungenashukela, njll. kungaba futhi ukudla okuseceleni okuhle kakhulu ezigulini.
2. Izithelo nemifino
Ukwengeza amavithamini A, C kanye nama-antioxidants angalwa nomdlavuza kanye namaminerali abalulekile emzimbeni, izithelo nemifino kuyisinqumo esifanele ezigulini ezinomdlavuza wamaphaphu. Lokhu futhi ukudla okuqukethe ama-carbohydrate amaningi amahle asiza ukukhiqiza amandla amakhulu omzimba. Eminye imifino emihle ingadliwa njenge: Iklabishi, i-watercress, isipinashi, isipinashi, isipinashi, utamatisi, i-kohlrabi, amazambane, …
3. Ukudla okunamaprotheni amaningi
Iziguli ezinomdlavuza wamaphaphu ngezinye izikhathi zikhwehlela igazi, okuholela ku-anemia. Ngakho-ke, ukudla kwesiguli kudinga ukwenezelwa ngokudla okunamaprotheni amaningi njengalokhu: ukudla kwesoya, amaqanda, ubisi, ubhontshisi, inyama engenawo amafutha, njll. amanxeba alulama ngokushesha, avikela ejenti elibi, asiza amasosha akho omzimba alulame ekuguleni.
4. Phuza amanzi etiye nsuku zonke
Itiye elihlaza lisiza ukuvimbela ukukhula kwamangqamuzana omdlavuza wamaphaphu, livikela amangqamuzana eziguli ezinomdlavuza ekubhujisweni ngempumelelo kakhulu kunamavithamini C no-E.
Ngakho-ke, iziguli ezinomdlavuza wamaphaphu kufanele zenze umkhuba wokuphuza izinkomishi ezingu-2-3 zetiye elihlaza njalo ukuze zithuthukise isifo sabo.
2. Ingabe iziguli ezinomdlavuza wamaphaphu kufanele ziphuze ubisi?
Njengamanje, kunemibono engqubuzanayo yokuthi iziguli ezinomdlavuza wamaphaphu akufanele ziphuze ubisi ngoba izakhi zobisi “zingondla” amangqamuzana omdlavuza ukuze akhule.
Ngakho liyini iqiniso ngale ndaba? Ingabe iziguli ezinomdlavuza wamaphaphu zidinga ngempela ukuba kude nobisi?
Impendulo ithi “CHA”! Lona umbono odukisayo ngokuphelele mayelana nokunakekelwa kweziguli ezinomdlavuza.
Ubisi aluyona nje ingozi ezigulini ezinomdlavuza, kodwa futhi luwukudla okunomsoco futhi okumunca kalula ukusiza iziguli ukuthuthukisa impilo yazo.
Ngokusho kongoti bezokudla, ubisi lwabantu abanomdlavuza wamaphaphu lungaletha izinzuzo eziningi ezigulini ezifana nalezi:
– Yehlisa ukucindezeleka, ukukhathala
Ubisi luqukethe amavithamini namaminerali amaningi ukusiza iziguli zehlise ukukhathazeka nemizwelo engemihle futhi zithuthukise imizwa yazo kangcono.
Ngakho-ke, ubisi lufana “ne-panacea” yokusiza iziguli ukuba ziphumule ngemva kosuku olude lokwelashwa komdlavuza ocindezelayo nokuqeda amandla.
– Isiza ukuqinisa amathambo namazinyo
Wonke umuntu uyazi ukuthi ukwelashwa komdlavuza kuza nemiphumela eminingi engemihle, futhi enye yazo izinkinga zamazinyo njengokubola kwamazinyo, ukopha kwezinsini noma amathambo abuthakathaka (i-osteoporosis).
Ukunciphisa lezi zinkinga, ubisi lungenye yezithako ezingcono kakhulu ze-calcium emzimbeni ezituswa izazi zokudla.
– Dambisa ubuhlungu bemisipha
Ngenxa yokuqukethwe kwamaprotheni acebile, ubisi luba yisinqumo esingcono kakhulu ezigulini sokwandisa uketshezi lomzimba futhi lusize ukukhulula ubuhlungu bemisipha.
Ngaphandle kwalokho, kubantu abanempilo, ubisi luyisixazululo esihle kakhulu sokusisiza sithuthukise ukukhula kwemisipha.
– Nikeza abagulayo amandla
Ukuqinisekisa ukuthi isiguli sigcwaliswa ngokugcwele ngezakhi, ubisi lubuye lungenye yezindlela ezingcono kakhulu ngoba luqukethe izakhi eziningi ezingaguqulwa zibe izinsimbi zamandla emzimbeni njenge: sodium, potassium, lipids , amaprotheni, amaminerali, amavithamini. (A, D, B12, C, B6),…
– Yehlisa ukukhula komdlavuza
Ngokusekelwe kwabanye abacwaningi, ubisi kucatshangwa ukuthi lunamandla okuvimbela ukukhula kwamangqamuzana omdlavuza, ukunciphisa i-metastasis kanye nokusabalala kwala maseli ezithweni ezizungezile.
3. Imibandela yokukhetha ubisi kubantu abanomdlavuza wamaphaphu
Namuhla, emakethe kunezinhlobo eziningi zobisi abantu abanomdlavuza wamaphaphu abangakhetha kuzo. Kodwa-ke, ukuze sithole imiphumela engcono kakhulu enqubweni yokwelashwa, kufanele sikhethe imikhiqizo yobisi eqondene ngqo neziguli ezinomdlavuza wamaphaphu ngezinye izindlela ezilandelayo:
– Kufanele sikhethe ubisi oluhlanganisa izithako eziningi ukusekela ukwelashwa nokuvimbela ukuthuthukiswa kwezimila ezimbi njenge: Curcumin, ingxube yamafutha emifino i-MUFA, i-PUFA, i-Isomalt …
– Izinhlobo zobisi zinomphumela wokunciphisa imiphumela emibi yezidakamizwa ezigulini ngesikhathi se-radiotherapy kanye ne-chemotherapy
Ubisi lunikeza izakhi ezibalulekile ezigulini ukuze zigweme ubuthakathaka nokuncipha kwesisindo. Ukusuka lapho, isiguli singakwazi ukuxhaswa ngokugcwele ngemisoco futhi sibe nokuphikiswa okungcono.
– Ubisi olunezakhi ezinhle zokuzivikela komzimba ukwandisa ukumelana nomzimba nakho kungenye yezindlela ezibaluleke kakhulu ezigulini.
– Abantu kufanele futhi babeke kuqala ekukhetheni ubisi lwabantu abanomdlavuza wamaphaphu olunama-flavour ehlukahlukene: i-citrus, i-peach, i-ginger, … ukusiza iziguli zigweme i-anorexia kanye nokufaneleka ngokwengeziwe ukunambitheka komuntu ngamunye.
4. Ubisi olungcono kakhulu lwabantu abanomdlavuza wamaphaphu
I-Prosure Milk – Ubisi Oluphezulu Olu-1 olungcono kakhulu lwabantu abanomdlavuza wamaphaphu abangaluthenga
I-Prosure milk iwumkhiqizo okhethekile wokudla okunomsoco weziguli ezinomdlavuza ophuma enkampanini edumile yaseMelika i-Abbott.
Ngezingxenye ezivelele zokudla okunomsoco ezifana ne-DHA, Amaprotheni, Amafutha, Ama-Carbohydrates, Iron, I-Vitamin B1, i-Prosure iye yafakazelwa njengenye yezixazululo eziphumelela kakhulu ukusiza ukuxazulula inkinga yokuncipha kwesisindo ezigulini ezinomdlavuza.
Akukhona lokho kuphela, ubisi lubuye lusize ukuthuthukisa umsebenzi wesistimu ye-musculoskeletal ngesikhathi se-chemotherapy kanye ne-radiation therapy. I-Prosure enephunga elimnandi, ukunambitheka okumnandi okuncane kuzoba yisinqumo esihle sokusiza ekwehliseni umuzwa we-anorexia, ngokuya ngokushintsha kokunambitheka kwesiguli.
I-Recova Gold Milk
Ngezithako eziyinhloko ezingeniswe zivela e-US, ubisi lwe-Recova Gold luhlanganisa izithako eziningi ezinomsoco ezinothe ngamaprotheni namafutha ukuze zinikeze amandla ezigulini.
Ikakhulukazi, i-Recova Gold nayo iqukethe i-turmeric essence, i-EPA, i-DHA – ukukhetha okuhle kwesisindo, ukusiza iziguli zidle kangcono, zigaye kangcono futhi zivimbele ukuqunjelwa.
Kusukela lapho, umkhiqizo usiza ukusekela ukwelashwa komdlavuza ukuthuthukisa izinga lempilo yeziguli.
Ubisi lwe-Peptamen luwumkhiqizo wohlobo lwaseSwitzerland i-Nestlé. Umkhiqizo ungasetshenziswa esikhundleni sokudla okuphelele futhi ungaphakelwa nge-catheter noma usetshenziswe njengesengezo ekudleni kwansuku zonke.
Yakhelwe nge-whey protein hydrolyzate yaba ama-Peptides acebile ngamafutha, i-Peptamen ifakazelwe ngokwesayensi ukuthi inenzuzo ekusizeni iziguli ukuthi zigaye kahle futhi zikhuthaze i-anabolism yokwakha imisipha. Ngesikhathi esifanayo, umkhiqizo uphinde usekele i-anti-oxidant, ivikela amaseli afanele iziguli ezinomdlavuza.
Kusukela ngo-2012, i-Fortimel – umkhiqizo wenkampani yaseDutch i-Nutricia – ingeniswe ngokuqondile yi-Ollin Joint Stock Company kanye nebhokisi langempela lisuka eJalimane liya eVietnam.
Ngokuqukethwe kwamaprotheni kufika ku-35% phezulu kuneminye imigqa yomkhiqizo emakethe, i-Fortimel iwubisi oluhle kakhulu lweziguli ezinomdlavuza wamaphaphu, olusiza ukugcwalisa ngokushesha amaprotheni ngemva kokugula noma ukuhlinzwa.
Ngesikhathi esifanayo, i-Fortimel futhi iletha ukunambitheka okumnandi ukusiza iziguli zigweme i-anorexia.
Ubisi olusekelayo – 200ml
Ubisi olusekelayo luwumkhiqizo wokudla okukhethekile wezokwelapha weziguli ezinomdlavuza wase-Kabi futhi ungeniswa ngamabhodlela agcwele evela e-Federal Republic of Germany.
I-Supian Milk iqukethe izakhi eziningi ezifana ne-Protein, i-EPA, i-DHA evela kumafutha ezinhlanzi, i-fiber, ecebile ngamafutha, ikakhulukazi i-MTC. Akukhona lokho kuphela, ukunambitheka kwalo mkhiqizo nakho kuyinzuzo enkulu. Ngokunambitheka kwekhofi okumnandi kwe-Cappuccino futhi kulula kakhulu ukuyiphuza, ubisi lwe-Supportan luyisinqumo esihle kakhulu ezigulini ezinomdlavuza wamaphaphu.
Umkhiqizo unezinto zokusetshenziswa eziyinhloko ezingeniswe zivela e-US, ezenziwe ngemigqa yesimanje yezobuchwepheshe ngaphansi kweseluleko sochwepheshe abaphambili basekhaya nabangaphandle.
Ngokubunjwa kwe-Whey Protein, ubisi lwe-Digesta lusetshenziswa njengendlela ekhethekile yokudla okunomsoco ezigulini, abantu abane-comas ejulile, iziguli ezinomdlavuza … Ngakho-ke uma udinga ukuthola ubisi kubantu abanomdlavuza wamaphaphu, ungabhekisela kumkhiqizo. lo mkhiqizo!
Ngebhodlela elincane kuphela elingu-125ml, i-Foticare iwumkhiqizo wokudla okunomsoco ofaneleka ngokwedlulele wenkampani yaseDutch i-Nutricia yeziguli ezinomdlavuza wamaphaphu.
Ngokuqukethwe kwe-11.3 g/125 ml Protein, whey protein kanye ne-0.76g EPA, iziguli ezinomdlavuza ezisebenzisa i-Foticare zizonqoba ukuncipha, ukuntuleka kwamandla nokungondleki.
I-Foticare inikeza izinketho ezimbili kubasebenzisi: I-Cappuccino ne-Orange Lemon flavour ayimnandi kakhulu, isiza iziguli ezinomdlavuza ukuba zithuthukise i-anorexia kanye nokulahlekelwa ukunambitheka.
I-Colostrum Alpha Lipid Lifeline
I-Alpha Lipid Lifeline Colostrum ikhiqizwa ngobisi lwenkomo oluyi-100% olusuka eNew Zealand, kulayini wobuchwepheshe obuphambili be-Alpha Lipid. Umkhiqizo uqinisekisa ikhwalithi enhle futhi uphephile ezigulini ezinomdlavuza wamaphaphu.
Ikakhulukazi, i-Alpha Lipid Lifeline colostrum nayo inezici ezivelele uma kuqhathaniswa nobisi oluvamile njengokuthi: ukunikeza amasosha omzimba amaningi (i-immunoglobulin A, D, E, G, njll.) kanye nezici ezikhulayo. ukukhula, ukungatheleleki kwesiguli.
5. Qaphela lapho usebenzisa ubisi kubantu abanomdlavuza wamaphaphu
Nakuba ukusebenza kobisi ezigulini ezinomdlavuza kungenakuphikiswa, kufanele futhi sikhumbule lokhu okulandelayo ukuze sigweme ukusebenzisa ubisi ezigulini ezinomdlavuza wamaphaphu kulethe imiphumela engemihle: :
Ukuze iziguli zingabi nezinkinga zempilo ezifana nokukhuluphala ngokweqile, ukukhuluphala ngokweqile, ukungasebenzi kahle kwenhliziyo nemithambo yegazi, ukuphazamiseka kweshukela egazini, iziguli kufanele ziphuze kuphela mayelana ne-150-200 ml yobisi ngosuku.
Ukukhetha isikhathi esifanele sosuku ukuze kugcinwe i-metabolism enhle nokuphepha kwezempilo kuyinto iziguli ezinomdlavuza okudingeka ziyinake.
Zama ukuphuza ubisi ngezikhathi ezimnandi njengokuthi: ngemva kokuzivocavoca, ukuvivinya umzimba, njll. Ngaphandle kwalokho, ukuphuza ubisi ngemva kokudla kwasekuseni noma kwasemini nakho kungasiza iziguli ukuba zithuthukise ukusebenza kwesistimu.
Okulandelayo okukhethekile okufanele sikuqaphele ukuthi akuwona u-100% wabantu ongaphuza ubisi ngaphandle kokungezwani noma ukungakwazi ukubekezelela ubisi. Ngakho-ke, kuyadingeka ukutadisha ngokucophelela umlando wesiguli sokungezwani komzimba ukuze ugweme ukuqunjelwa noma isifo sohudo.
Ngaphezu kwalokho, kubantu abanomdlavuza nesifo sikashukela, kufanele futhi banciphise ukusetshenziswa kobisi olunoshukela futhi esikhundleni salo bafake ubisi lwezitshalo olunjengama-alimondi, ubhontshisi wesoya, nama-cashews.
Ngenhla kukhona konke ukusuka ku-A kuye ku-Z, ulwazi oluwusizo kakhulu kuwe mayelana nobisi lwabantu abanomdlavuza wamaphaphu. Ngethemba ukuthi lesi sihloko sikusize wenze ukukhetha okungcono kakhulu!
XMP và Intel XMP là gì? Hướng dẫn kích hoạt để tối ưu tốc độ RAM | Muasalebang